Arsenal Oo Aan Ku Degdegeynin Go’aan Ku Aadan Van Persie, Inkastoo City Iyo Juve Ay Xiiseynayaan. - jornalizem
Arsenal Oo Aan Ku Degdegeynin Go’aan Ku Aadan Van Persie, Inkastoo City Iyo Juve Ay Xiiseynayaan.
Arsenal ayaan ku degdegi doonin inay xaqiijiyaan mustaqbalka kabtankooda Robin van Persie, sida uu qeexay madaxa fulinta kooxda gunners Ivan Gazidis.
Van Persie ayaa Arsenal u dhaliyey 37 gool xilli ciyaareedkii dhamaada laakiin waxa uu ka hayaami karaa Emirates Stadium xagaaga, hadii lagu guuldareysto in la isku waafaqo in loo dheereeyo qandaraaska, kaasoo ka dhacaaya dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Wadahadalo Van Persie loogu dheereyn lahaa qandaraaska ayaana soo idlaaday bishii lasoo dhaafay iyadoo aan waxba la isla meel dhigin. Manchester City ayaana balan adag ku qaaday inay lasoo wereegeyso ninka reer Holand hadii uu diyaar noqdo.
Robin Van Persie oo la maqan haatan xulkiisa Holland ayaa amaanay koox kale oo lala xiriirinayo Juventus balse waxa uu diiday inuu ka hadlo mustaqbalkiisa taasoo uu ku sheegay inay heshiis ku galeen Arsenal inuusan ka hadlin mustaqbalkiisa.
Waxaana ay arintaasi keeneysaa shaki weyn oo laga qabo mustaqbalka ciyaaryahan, Gazidis ayaa u sheegay webka Arsenal:
“Robin waan wada fariisanay dhamaadkii xilli ciaareedka waxaana yeelanay kulan wanaagsan.”
Waxa uu intaas ku daray: “Wixii aan isku raacnay kulankaas waxa uu ahaa inaan sir ka dhigano wixii aan ka wada hadalnay xagaaga oo dhan, islamarkaana aan ku dhawaaqno go’aan walba xilliga saxda ah”
“Waa inaan ixtiraambaa inaan isku raacnay inaan sir ka dhigano wax walba. Robin waxa uu diirada saarayaa haatan Euro, waqtiga saxda ah ayaana warbixin soo saari doonaa”.
Robin van Persie ayaa dirada u saran kooxaha ugu waa weyn Yurub sida Real Madrid, Man City Iyo Juventus.